Njikwa Ogologo - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.
Home > Njikwa Mma
Shimge ahọrọ ihe ndị ka elu iji hụ na nnukwu nfuli mmiri; ndi mmadu na-acho ihe di iche iche a ma ama na ndi mmadu nwere ike iji nweta ihe ndi mmadu nwere ike ime ka ha nwee ike idozi ya. na-etinye nnukwu ego iji nweta ụlọ ọrụ na-eduzi ngwá ọrụ nhazi ma na-eji ngwá ọrụ ndị na-ahụ maka ụwa, wee hụ na oke nhazi nke akụkụ na-eme ka usoro nsị nke mmiri ahụ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị na nke a pụrụ ịdabere na ya; ma nwekwa ọtụtụ nhazi nke ngwa nhazi akpaka iji chọpụta mgbakọ ngwaahịa na akpaka.
Nnyocha nlezianya dị oke mma
Ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo ugo nyocha elele asatọ iji nyochaa ngwaahịa ndị dị na ntinye mmepụta ma nyochaa ihe nlele ndị yiri ya dịka nzere nnabata nke nchọpụta ngwaahịa a, iji hụ na mmezu nke ngwaahịa ndị a rụzuru ihe ndị iwu chọrọ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo oche ụlọ nyocha nke asaa, wee chịkọta ihe ndị dị na "Pump Reliability Verification Test Standard & quot; dịka ụkpụrụ nke mba. N'okpuru njirimara a na-arụ ọrụ nke ndị ahịa, nkezi oge na-enweghị nsogbu na-arụ ọrụ / nkezi oge na-arụ ọrụ tupu oge mbụ nke ngwaahịa a nwalere, a na-enyochakwa ịdị ize ndụ nke ngwaahịa a. Njikọ ndị na-adịghị ike na imewe na imepụta na-egosipụta na usoro nyocha ahụ, a na-etinyekwa ihe ndị dị mkpa maka ịdabere na ịdabere.